Indonesia in Focus: Dhibaatooyinka qaxootiga iyo masiibooyinka, cawaaqibka dembi kii?
Dhibaatooyinka qaxootiga iyo masiibooyinka, cawaaqibka dembi kii?
Kortaan ayaa la ma uusan dhammayn (369)
(Qaybta saddex boqol iyo lixdan iyo sagaal), Depok, West Java, Indonnesia, September 13, 2015, 9:03 pm).
Xaaladda bani-aadamnimo ee Suuriya, Ciraaq iyo Yemen taas oo horseeday in qulqulka qaxootiga in Europe iyo dalalka kale ee Bariga Dhexe iyo Australia waxaa laaluusheen dalalka harraadi awoodda iyo awood siyaasadeed, taasoo keentay in dagaalka sii dheerayn iyo.
Kaliya fiiri dagaalada ka socda wadanka Suuriya, Assad ee taliskii talisnimo oo aad rabto inaad ku sii xoog gacan ka ciidan ahaan iyo siyaasad ay Iran, Russia iyo Hezbollah la dagaalamayay kooxaha mucaaradka Lubnaan in ay taageerayaan Maraykanka iyo xulafadiisa, oo ay ku jiraan isbahaysi ka mid ah dalalka Carabta hogaaminayo Saudi Arabia.
Islamic State of Iraq, Syria iyo RC (ISIS) xoojiyey jihaadiga 25,000 oo dhallinyaro ah oo ka 100 dal, oo ay ku jiraan jihaadiyiinta ka Mareykanka, Australia iyo Yurub inay la diriraan mar la diriray Itobiya oo saldanad shiicada Ciraaq in ka caawiyay Iran iyo Xisbullah Asad. Aan xuso isbahaysiga ee Saudi Arabia ay weheliyaan Cooperation Council Central Gulf dalalka dagaalamaya mucaaradka Shiicada Xuutiyiinta ayaa lagu taageeray Iran.
Rafaad iyo murugo wixii ku dhacay dadka Yemen, Ciraaq, iyo Suuriya.
Ma waxan oo dhan ay sabab u tahay Cadaabka Eebe sabab u ah dembiyada kuwa hadda ku dhaqankiisa diinta Islaamka Qallooc.
Sida la og yahay Saudi Arabia ayaa ku eedeeyay ISIS ayaa garoomada ka fikirka Islaamiga loo yaqaan Kharijites, shiicada sidoo kale culimada of Saudi Arabia iyo Golaha ictiqaadsanyahay Indonesia (Macca) sida nidaam ah, sababta oo ah waxa uu leeyahay mengkafirkan Asaxaabtii Nabi Muxammed.
Culimada Saudi dhihi halkaasna kama ay helin farcamaan kooxo kale ee Muslimiinta ah iyadoo la raacayo asaxaabta Ahl Sunnah wal jamaacadda marka laga reebo ka mid ah kuwa raaca As-Salafkii al-Saalax Ahlul Xadiithka.
(VOA) - Dalalka Yurub, Mareykanka iyo dalalka hodanka ah ee Gacanka Faaris ka yar dab ka yimid xagga ururada xuquuqda aadanaha aanad u gudan toddobaad ku filan si ay u caawiyaan dhibaatooyinka soo galootiga ah ee Bariga Dhexe.
Yurubta bari ayaa diidan in ay siin sharci qaxooti tiro badan oo loogu talagalay dadka ka soo cararaya isagoo ka baxsanayo cadaadis iyo dagaalada, wuxuuna u ogolaanaya inuu ku nool dalalkaas. Dalalka reer Faaris Gulf heshay oo kaliya shaqaalaha muhaajiriinta ah, laakiin furo ikhtiyaarka iyaga tarxiilaan waqti kasta oo ka tagay.
Wareysi uu siiyay VOA, Kenneth Roth, oo ah agaasimaha fulinta ee Human Rights Watch ee fadhigiisu yahay America, ayaa sheegay in dalalka xubnaha cusub ee Midowga Yurub ayaa lagu muujiyay habdhaqanka taariikhi ah phobic arrinta qaxootiga Muslim ka ah dagaalada Al-Shabaab ee Bariga Dhexe.
Roth ayaa sheegay in dalalka Yurubta Bari waa in la wadaago - ma aha oo kaliya faa'idooyinka laakiin sidoo kale loo xilsaaray oo ah xubin ka tirsan Midowga Yurub - wadaaga waajib sharci ah in ay aqbalaan dadka ay magangalyo.
Roth ayaa sheegay in dhibaatada qaxootiga ee hadda jira ma aha dhibaato ah marka la eego tirada - tirada dadka qaxootiga ah waa uun 1 boqolkiiba dadweynaha oo ka mid ah Midowga Yurub iyo dalalka xubnaha ka ah si fudud iyaga nuugo kartaa - laakiin tani waa dhibaatooyin siyaasadeed oo keena cuqdada iyo siyaasad.
Ma jiro qaxootiga Suuriya ayaa si rasmi ah dib u dejin ah ee dalalka reer Faaris Gulf sida Kuwait, Bahrain iyo Imaaraadka Carabta ee Midoobey, inkastoo ay sheegayaan saraakiisha Gulf reer Faaris ahaa jiraan reer Suuriya kuwaas oo galay on fiise booqasho oo iima aydaan soo noqon. Ururada xuquuqda aadanaha aanay dadka ku odhan, kuwaas oo loo ogolaaday iney joogaan qoys ee qaniga ah iyo awood badan soo. Roth cambaareeyey Saudi Arabia iyo dalalka reer Faaris Gulf kale oo aan aqbalin in qaxootiga.
(BBC) - Tirada dhimashada ay sabab u tahay burburkii wiish ee, Haram ee Mecca, keceen inay 87 qof, sida ay Hay'adda Difaaca Rayidka ah ee Saudi Arabia.
Hadda ka hor ayaa sheegay in tiro ka mid ah dhibbanayaasha oo ku saabsan 60-qof.
Marxuumka waxaa ku dhaawacmay shil oo magaalada quduuska ah ee Mecca, Friday, September 11, gaarey ugu yaraan 183 oo qof.
Mecca ayaa waxaa isku diyaarinaya inay soo dhaweyn qaar ka mid ah laba milyan oo qof, kuwaas oo Xajka ka dhigi doonaa.
Video A daabacay on YouTube-taas oo aan la hubiyay keasliannya- muujinaysaa saratoosiye oo maqlay dhawaajiya cod weyn ee asalka ah dadka la qaylinaya argagax ku dhacay.
Waxaa weli ma cadda sababta dhabta ah ee shilka iyo sanam muujinaya a wiish oo waaweyn cas oo u muuqatay in ay dhici.
Inkastoo la sheegay in wiish ay burburtay galay dhinaca bari ee masjidka kadib markii dabaysha iyo roob xoog leh.
Krane weyn oo cas dhex arki karaa saqafka sare ee masjidka burburay.
Xaafadda Arabian Peninsula todobaadkii hore ka dhacay snowstorm ah.
"Waxa kale oo maanta roob culus waxaan ahay In Jeddah BBC Waa ka shalay horey u sandstorm In Madiina...": Muwaadin An Indonesian ahaa Jidda, Jannati Jannati, farriin u Facebook BBC Indonesia qor
Inkasta oo dadka kale ee Facebook, Warda Zulfakar, ayaa sheegay, "xajka A qof ka Indonesia (Sector 4) dhintay. Tim Caafimaadka ee BPHI Mecca ayaa xumadii dhibanayaasha." Laakiin warbixinta ayaa wali aan la xaqiijin karin ilaa news lagu soo dejiyey.
Masaajidka HaramImage copyrightReuters
Ballaarinta meel laga yaabaa 400,000 m2 oo ku saabsan 2.2 milyan oo waqti isku mid ah.
Shaqada dhismaha Masaajidka Grand ee Mecca ayaa socday muddo waqti dheer oo sanadkii la soo dhaafay, tirada dad sodcaal ah waa la dhimay sababo ammaanka sababtoo ah shaqada.
Ayaa sheegay in aagga Masaajidka oo la qorsheeyay in la balaadhiyay si ay 400,000 oo m2 oo ku saabsan 2.2 milyan oo waqti isku mid ah.
Qaar ka mid ah 350 xajka ku dhintay shil isriixidda ah sanadkii 2006.
Tirada dhimashada ayaa ka Indonesia ay sabab u tahay dayrta ee khafiyad dhacdo in, Haram ee Mecca ee, korodhay ilaa lix.
Si yaqiin ah la soo jeediyay Hirgalinta Information shaqada-dhaqanka Bulsheedka Qunsuliyadda Guud ee Jeddah, Sharif Shahab.
"Muwaadiniinta dalka Indonesia ku dhintay sabab u ah wiish dhacdada ay gaareen lix. Marka ururtay oo qaba dhaawacyo, dhamaan dhibbanayaasha lacag dhan 37 qof, "ayuu yiri Shariif u sheegay BBC Indonesia ka, Jerome Wirawan.
Hadda ka hor, labada dhibbanayaasha Indonesia yaqaan ka embarkation Medaan (Mes 09) iyo embarkation Jakarta-Bekasi (JKS 03) dhintay.
The dheeraad ah afar dhimasho ka koobnaa laba qof oo ka Medaan embarkation ah, mid ka mid ah embarkation Padang, iyo mid kale oo embarkation Jakarta-Bekasi.
Gudoomiyaha Gobolka Mecca, Prince Khalid al-Faisal, ayaa amar ku dhaarinta baadhitaanka.
Si aad u eegaan baaxadda burburka iyo heerka ammaanka agagaarka Haram ah, guddoomiyaha gobolka Mecca, Prince Khalid al-Faisal, ayaa amar ku dhaarinta baadhitaanka.
Si kastaba ha ahaatee, Agaasimaha Guud ee Difaaca Authority of Saudi Arabia Civil, Abdullah bin Suleiman al-Amr, isagoo sheegay in dabayl xoog badan yahay sababta dayrta ee khafiyad in dhuftay Masaajidka Grand ee Mecca, ku dhinteen ugu yaraan 107 oo qof, waxa Jimcihii (11/09).
Wuxu sheegay, in, xawaaraha dabaysha hadda 83 km / h ku xiga roob culus hoos u reebtay geedaha iyo calaamadaha waddooyinka.
Marka waraysatay TV-ga Al-Arabiya, Al-Amr ayaa sidoo kale beeniyay wararka sheegaya in Hillaac ku dhuftay khafiyad ilaa markii ay burburtay qalabka.
Gobolka Kacbada hareereysan khafiyad ah aawadood oo ah dhismaha.
Iyada oo ku saleysan maragga markhaatiyaal, Dabaysha afuufi degaanka ee Haram hor burburto khafiyad taasina waa mid aad u xoog badan.
Dave Ariant Yusuf, taliye Hajj hay'adda safarka ka Indonesia, daawashada sida dabayl sababa caag ah, baakadaha ah, iyo buunbuuniyey qashinka kala duwan ilaa ay ka gaarayso height ah qol hotel lix dabaqa meeshuu degganaa. Hoteelka ayaa waxa uu ku yaalaa ilaa 50 mitir u jirta bogga Haram ah.
"Cirku ayaa noqday madow. Dabayshu waa mid aad u xoog badan oo si lama filaan ah uu furmo suuqa qol hotel gariiraan. Roob soo degay aad u culus oo socon ilaa 30 daqiiqo. Markaas si lama filaan ah ayaa waxaa jiray kor u cod weyn. Markii dambe waxa aan gartay inay saacaddaas ahayd sanqadhii markii wiish ku dhacay, "ayuu yiri Dave.
Saudi waxgaradka ku dhalleeceeysay xukuumadda waa in ay bixiyaan si ay ammaanka dadka deegaanka iyo dad sodcaal ah dareenka.
Marka laga factor cimilada, Irfan Al-Alawi of Islamic Heritage Research Foundation oo fadhigoodu yahay Magaalada Mecca, ayaa sheegay in xukuumadda Saudi waa in aad ka fikirto badbaadada ee dadka deegaanka iyo dad sodcaal ah in la xasuusto waxaa jira khafiyad weyn 15 wareegsan Haram ah.
"Gobolka oo dhan (masaajida) sida goobta dhismaha. Saudi Arabia waa in dib looga fikiro istaraatijiyad caafimaadka iyo ammaanka sababtoo ah waxaa jira 800,000 oo qof oo ku nool masjidka markii uu shilku ka dhacay, "ayuu yiri Al-Alawi.
Al-Alawi waa mid ka mid ah culimada kii qaylo dhaleeceeyay dhismaha hareeraha meesha of Haram ah. Wuxu sheegay, in dhismaha dhabta ah baabbi'in raad Nabi Muxammed nolosha.
Dhismaha ayaa waxaa loo kordhiyay agagaarka Haram in ay 400,000 oo mitir oo laba jibbaaran oo qaadi kara 2.2 milyan oo qof hal mar.
Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay BBC, in la kordhiyo kalsoonida Mareykanka ka mid ah dowladda in maleeshiyaadka isku dalalka Islaamka, ama ISIS sameeyo iyo sida loo isticmaalo hubka kiimikada ah ee Ciraaq iyo Suuriya.
Maraykanka ayaa sheegay in ugu yaraan afar shil ku lug leh labada dhinac ee isku dhacu ee Ciraaq-Suuriya gobolka halkaas oo ISIS la isticmaalayo hubka kiimikada khardal le'eg, sida dhiibay sarkaalka.
Waxa kale oo rasmi ah ayaa xusay isticmaalka hubka kiimikada waa budo ah.
Kooxaha BBC ee xadka Turkish-Suuriya ayaa shegay inay heleen cadaymo si ay u taageeraan sheegashada.
Mareykanka ayaa aaminsan in waxa ay leedahay koox cell ah oo u hibeeyeen ilaa ay ka dhigaan hubka.
"Waxay isticmaali khardal ah," ayuu yiri qof ku saabsan ISIS. "Waan ognahay in ay isticmalaan."
The khardal hubka kiimikada waxaa loo isticmaali karaa in budo ah oo la soo baakadeeyey ee qarxa dhaqanka sida dhoobada malaasta ah, sida ay soo gudbiyeen saraakiisha Mareykanka.
"Waxaan aragnay waxa ay ku isticmaali ugu yaraan afar dhacdooyin kala duwan ee labada goobood oo xadka Suuriya Ciraaq iyo.
Marka qaraxday hub this, kuwaas oo gaadhay in dambaska khardal hubka kiimikada u nabarrada waxay doonaa.
Saraakiisha ayaa sheegay in beesha sirdoonka ayaa aaminsan in ay jiraan saddex sharaxaad suurto galka ah ee sida ISIS helaan hubka kiimikada halista ah.
In daawashada bulshada sirdoonka, sida gaadhsiiyey saraakiisha Maraykanka, inay sameeyaan.
"Waxaan qiimaynta iyaga ayaa baaro unugyada mas'uul ka ah hubka kiimikada firfircoon ay qabanayaan iyo isku day oo si fiican u sameynta hesho," ayuu yiri sarkaal u sheegay.
Aragti kale oo kale oo ka tirsan ISIS heli hubka kiimikada ee ku dhuumaalaysanayaan ee Ciraaq ama Suuriya.
Waxaa cad in Xarakada heli hubka kiimikada ee Ciraaq, ayaa sheegay in, sababta oo ah ciidamada Maraykanka u badan tahay inuu soo helo inta lagu jiro olole ciidan oo laga sameeyay dalka muddo toban sano ah.
Saraakiisha ayaa sheegay in ay ka muuqatay in ay ku soo qabteen Itobiya oo hub kiimikaad ah ee Suuriya ka hor Itobiya ayaa lagu qasbay in ay bixiyaan sahay by hanjabaad weerar cirka Maraykanka ee 2013.
TOP CADDAALADDA ahu SWT
Qof kasta oo raaca Hanuunka (Eebe), markaas hubaal wuxuu ku samayn, waayo, (ku Hanuunta) isaga u gaar ah; oo ku alla kii dhumiyey markaas hubaal uu guuldarro (khasaaraha) naftiisa. Oo weliba anigoo dembi leh ma dhali karo dembiyada dadka kale, mana nihin mengadzab doonaa ka hor inta aan ku diray Rasuul. [Al-Isrâ` / 17: 15].
Sida xaqiiqada ah aayaddan qeexayaa caddaaladda Eebe Ilaaha Qaadirka ah iyo xigmad kaamil ah. Imam Ibn al-Qayyim Qisoon rahimahullah ereyada:
Eebe Quduuska ah ugu yeelaan afar sharciyada u colka uu, oo waa dulucdii caddaaladda iyo xigmad, (tusaale ahaan): (1) in hanuunka helay addoon rumaysad iyo camal wanaagsan, (naxariis) waa inuu nafsaddiisa, oo aan u dadka kale, (2) khaa'imiin yihiin in, ay ka maqan yihiin hanuun, (khasaaraha) qudhiisu waa kor ku xusan, ma ka badan kuwa kale, (3) in qofka aan loo jirdilay by dembiyada dadka kale, (4) in Alle ma noqon doonto jirdil, laakiin ka dib markii la aasaaso caddeyn qofka qaba (Nabi) rasuulladii.
Markaas ka fiirsan waxa ku jira afar ka mid ah sharcigan, taas oo samaysa xigmadda Eebe Ilaaha Qaadirka ah, oo uu caddaaladda iyo wanaagga uu, iyo gabaynayo kuwa la khiyaaneeyey iyo kan leenahay rajooyin been ah; sidoo kale gabaynayo mid ah kuwii doqon Eebe, magacyada iyo sifooyinka uu. 
Aayaddani waxa ay ka kooban tahay afar weedho weyn:
[Kuwa Raacno Hanuunka (Eebe), markaas hubaal wuxuu ku samayn, waayo, (ku Hanuunta) isaga u gaar ah].
Imam Ibn Kathir rahimahullah yiri, '' Eebe dadka ogeysiiyo in ku alla kii u dhaqmeen si waafaqsan hanuunsanyahay (waa Alle), ka dib markii al-Haq oo eryo raad-sheegid, markaas waxa uu heli doonaa natiijada ah in uu yahay mid ammaan mudan waayo, isaga qudhiisu ''.
[Oo ku alla kii dhumiyey markaas hubaal uu guuldarro (khasaaraha) laftiisa].
Imam Ibn Kathir rahimahullah yiri, '' Ciddii dhumiyey, in kuwa Baadida ah ka al-Haq oo laga daayo jidka toosan, markaas hubaal waa inuu xunxun isaga, waayo, oo wax shar ah isaga. ''
[Dembile ah ma dhali karo dembiyada dadka kale]
Imam Ibn Kathir rahimahullah yiri, "Oo bal anigoo dembi leh ma dhali karo dembiyada dadka kale, iyo kuwa dambiyo aydaan falaynin dambi marka laga reebo inuu nafsaddiisa, sida hadalka Eebe,
Oo haddii qof ahaayeen si ay ugu yeedhaan oo uu miisaanka (dadka kale) si loogu qaado dembi tiadalah korkiisa ha ahaato oo dhan. [Fatir / 35: 18].
Markaasaa waxaa taas ma aysan ka horimaan hadalka Eebe,
Oo runtii kuwii qoladii dhali doonaa ana (Dambiga) iyaga, iyo culayskooda (dembiyada dadka kale) ee intaa dheer in ay culaabtooda u gaar ah. [Al-'Ankabut / 29: 13].
oo ay qaado dembiyada dadka ay qaldaan oo waxba ma oga. [An-Nahl / 16: 25].
Maxaa yeelay, dadku ka soo qaaday in ay khaa'imiin yihiin sidan lahaa dembiyada ay baadi naftooda iyo kuwa kale oo la dembi, maxaa yeelay, waxay Dhumin dadka kale, iyada oo aan hoos u Dambigooda Dartiis oo dhan, iyo iyada oo aan yar lagu qaado dembigooda. Kuwaas waxaa ka mid ah baa caddaaladda iyo naxariista Eebe Ilaaha Qaadirka ah Jallaepada inuu addoommadiisa. ''
[Waxaana aan mengadzab doonaa ka hor waxaan la soo dirray Rasuul].
Rahimahullah Imam Ibn Kathir waxay yidhaahdeen:
Tani waxay ku dhawaaqidda caddaaladda Eebe Ilaaha Qaadirka ah, oo uu ahaa ma doonayo mengadzab mid, laakiin ka dib markii la aasaaso caddayn in ninka la soo socda ee Rasuulku isaga. Sida hadalka Eebe,
Mar kasta oo set (gaalada) jahannamada ku tuuro, ilaalada (cadaabta) iyaga weydiiyay: "Ha abid idiin yimid (adduunka) dige?" Waxay ku jawaabay: "Haa, waxaa jira waxaa idiin yimid noo diga ah, laakiin aan beenin (Qur'aanka), waxaana uu yiri:." Eebe waxba ma xaqiro,; Waxaad ma aha waxaan baadi weyn "[al-Mulk / 67: 8-9]..
Oo iyagu (Gaalada) qeyliyo in cadaabta: "Eebow naga Bixi, sida xaqiiqada ah waxaannu samayn doonnaa oo Fala Camal Fiican, sida ka soo horjeeda waxa aynu samaynay". Hadaan (Eebe) ma uu cimrigaagu aad muddo ku filan in lagu fekero oo loogu talagalay dadka doonaya in ay qabaa, iyo (ha) idiin timid dige inay? Waxaana lagu yidhi dhadhamiya (Us adzab) iyo gargaarana aan helin loogu talagalay dadka daalimiinta. [Fatir / 35: 37].
Oo waxaa aayado kale oo muujinaya in Alle ma gelin doonaa qof cadaabta laga reebo kaddib markii uu yimid Rasuulku isaga. 
Sidaa darteed, maalintii ugu danbeysay ee ay jiraan dadka qaar oo ka cawday in Eebe in aanay xaq u leedahay in lagu jirdilo, maxaa yeelay caddeyn ah ma aha iyaga, oo Alle ka aqbalay sababaha ay u for. Waxa la sheegay in xadiiska sida soo socota:
Of Aswad bin Sari ', in Nabiga sallallaahu' Laahu calayhi wa calaa aalihii yiri: Maalinta Qiyaame, waxaa jira afar qof oo ku caban doonaa Eebe, kuwa dhegaha ah, ma waxba ku maqlin, buray ah; a neefo; iyo nin kuwaas oo ku geeriyooday fatroh da'da; (1) Marka aad tahay qof dhega la dhihi lahaa: ". O Rabb, Islam ayaa soo daray, laakiin ma aanan waxba '' maqlaan (2) Dadka ay xikmad ku odhan doonaa," O Rabb, Islam ayaa soo, halka carruurta yaryar melempariku la digada xoolaha ''. (3) Dadka waallida dhihi doonaa: "O Rabb, Islam ayaa yimaado oo aan garaadka lahayn oo dhan '' (4) Oo dadka dhintay fatrah da'da dhihi." O Rabb, mana yimaaddaan Rasulpun ah " . markaas Eebe ka qaadnay in ay si dhab ah isaga addeeci doonnaa Markaas Eebe kuwa ku amray wargeeyayaal u direen: "! Taga jahannamada geli lahaa" Nabiga n ayaa yiri: "By (Eebe) naftiisu Muxammad waa in uu gacanta, haddii ay u galeen, cadaabta dhabta ah waxa ay noqotay qabow iyo hambalyo iyaga ''. (In Sheeko kale oo Abuu Hurayrah wuxuu yiri: "Qofkii u galeen, waxa uu noqonayaa mid cadaabta dhab qabow iyo hambalyo isaga iyo kii aan u soo galo, wuu WajiWaji waxaa galay ''.) .
FAWÂ-ID EE AAYADAHA
Tani sharaf aayadda waxaa ku jira dad badan oo fawâ-id (maaddooyinka) oo sharaf leh, iyo kuwo kale:
1. Hidayah helay addoon, sidoo kale foomka rumaysad iyo camal wanaagsan, markaa naxariis waa inuu nafsaddiisa, oo aan kuwa kale.
2. Wanaag Qoor nolosha ku xiran tahay rumaysad iyo jacayl shalihnya markii ugu adduunka. Oo sidaas daraaddeed mid aan ku kalsoonaan kartaa Malaa'ig, nebiyada, quduusiinta, sheikh, Murshid (barahaaga), wadaadka, amir, macalimiinta, iyo kuwo kale.
3. reer xamarku addoon ay ka maqan yihiin hanuun, khasaaraha laftiisa korkiisa oo aan dadka kale.
4. Qofka aan loo jirdilay by dembiyada dadka kale.
5. Ilaahay ma jirdilka doonaa, laakiin ka dib markii la aasaaso caddayn qof diray Rasuulkiisa.
6. Justice Eebe waa qumman yahay.
7. Qofka dhumiyey casuumayaan dembiyadooda oo iyaga u gaar ah iyo dembiyadii dadka kale dhumiyey dhali, sababtoo ah waxa uu sabab u ahayd baadi.
Macluumaad aad u yar oo ku saabsan sharafta aayadda, waxaa laga yaabaa in faa'iido leh. Aamiin.
[Guuriyeen ka edition magazine ee As-Sunnah 08 / Year XVII / 1435H / 2014M ah. Publishers Guddiga Joogtada Foundation Istiqomah Surakarta, JL. Solo-Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo Solo 57 183 Tel. 0271-858197 Fax 0271-858196]